Puntland: Weeraro dagaal & Qaraxyo dhacay Boosaaso iyo Yalho
Home Somali News Puntland: Weeraro dagaal & Qaraxyo dhacay Boosaaso iyo Yalho
Labo Qarax oo ah nooca Bambada gacanta laga tuuro ayaa xalay lagu weeraray Bar-kaantarool oo ciidamada dowladda Puntland ku lahaayeen magaalada Boosaaso goobta loo yaqaan Afar Irdoodka.
Qaraxyadan waxaa ku dhintay hal qof waxaana ku dhaawacmay saddex qof oo kale, dadka dhaawaca iyo dhimashada soo gaaray ayaa dhamaan tood ah dad rayid ah oo ka agdhawaa goobta ciidamadu joogeen.
Ciidamada ayaa howlgalo kala duwan ka bilaaya xaafadaha magaalada Boosaaso gaar ahaan xaafada New Boosaaso oo ah goobta ciidanka lagu soo weeraray ilaa xalayna waxay wadeen howl galkooda oo ay dad ku soo qab qabteen.
Dhanka kale Deegaanka Yalho oo qiyaastii 50 Km u jirta magaalada Boosaaso waxaa ka dhacay weerar gaadmo ah oo ay soo qaadeen maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-shabaab oo ay ku qaadeen fariisan ciidamada Puntland joogeen waxaan ka dhashay dagaal socday waqti kooban.
Khasaaraha dagaalkan ayaan sicad loo ogeyn balse saraakiil ciidanka Puntland oo hadlay waxay sheegeen in jab gaarsiiyeen kooxdii dagaalka ku soo qaaday.
Bilihii u dambeeyey magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaa ka dhacayey weeraro Qaraxyo iyo kuwo toos oo lagu qaadayey Baro-kantarool waxaan masuuliyadeeda sheganayey Ururka Al-shabaab.
Somaliland: Wasiirka Arrimaha Dibadda Oo Ka Hadlay Qorshe Ay Kenya Somaliland Ugu Soo Magacaabayso Ergay
War Deg Deg Ah: Khilaaf Ka Dhex Qarxay Xukuumadda Iyo Muuse Biixi Iyo Waxa U Daaran Yahay
Somaliland: “Abaabulka Soomaaliya Iyo Puntland, Waa Abaabul Dhabtooda Ku Qaayisaya”